Pattern Lock ဖျက်နည်း
Windows Phone မြန်မာ Font ထည့်နည်း Downloads Games
Step2Failed Error
I MOBILE Firmware တင်နည်း
Samsung firmware ဆိုင်ရာ Windows Phone မြန်မာ Font ထည့်သွင်းနည်း iOS ဖုန်းများအတွက် Xiaomi ဖုန်းများအတွက်
မြန်မာစာတန်းထိုး Movie Health ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ Miscrosof Office ဆိုင်ရာ
လမင်းမောင် နည်းပညာတွင် Facebook, Gmail, Skype, Person, Twitter, Vzo Account များဖွင့်ပေးသည် One Account 2500 ကျပ်၊ ၀ယ်ယူလိုပါက လမင်းမောင် နည်းပညာ၏ Facebook Message Box သို့ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။ လမင်းမောင်နှင့်လမင်းလေးဘလော့အား လာရောက်ကြည့်ရူ့သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ၊ လာလည်သူများ
Samsung ဖုန်းများကို Firmware ပြန်တင်နည်း 9:58 PM
Samsung ဖုန်းတွေကို Firmware ပြန်တင်မယ်ဆိုပါက လိုအပ်ချက်တွေကတော့ Samsung Official FirmwareOdinKies or Samsung Usb Driver ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်တော့ Samsung ဖုန်းတွေကို Firmware ပြန်တင်လို့ရပါပြီ။ အရင်ဆုံး ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ Battery ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ခဏကြာရင် Battery ပြန်တက်ပြီး Volume Down + Power + Home Key အဲ့ ခလုတ်သုံးခုကို ဖိနှိပ်လိုက်ပါ။ ပထမတွေ့တဲ့ပုံကအရင်လာပြီး volume up ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဒုတိယပုံကို ရောက်သွားမှာပါ။ ဖုန်းကို Computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ Odin Software ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ မိမိ Download ဆွဲထားတဲ့ Firmware ဖိုင်လေးက တစ်ဖိုင်ထဲဆိုရင် Ap မှာထည့်ရေးပါ။ ဖိုင် သုံးဖိုင်ဆို ရင်တော့ ဖိုင်နာမည်တွေနဲ့ တိုက်ပြီး ဖြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Firmware ရေးခြင်းပြီးပါပြီ။ Read More
Sony ဖုန်းများ Pattern Password ဖြုတ်နည်း (Usb Debugging မ on ထားသောဖုန်းများအတွက်) 9:51 PM
Sony ဖုန်းများကို Pattern တွေ Password တွေချမိပြီး မေ့သွား တဲ့ ပြသာနာ ကတော်တော် များများမှာဖြစ်တက်ပါတယ်။ Sony စထွက်တဲ့ဖုန်းကနေ ယနေ့ခေတ်အထိ ထွက်ရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ ဖုန်းအားလုံးကို ယခုနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Pattern, Password ချမိပြီး Usb Debugging ကလဲ မ On ထားဘူးဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းနဲ့လုပ်ဆောင်ပါ။ Sony ဖုန်းတွေဟာ Original Stock Recovery ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် သူတို့ကို Factory reset ချချင်ရင် Firmware ပြန်တင်မှသာ အဆင်ပြေတာများပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ Fimware ပြန်တင်စရာမလိုပဲ Factory Reset Only လုပ်ပေးမှာပါ။ ဘာထူးခြား သလဲဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း File Share ပေးရာတွင်လဲ အခုနည်းဖြင့်ပေးလျှင် Size အနည်းဆုံးဖြစ် သွားမှာပါ။ ပထမဆုံး မိမိအနေနဲ့ မိမိဖုန်းရဲ့ Firmware တော့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ Sony ဖုန်းတွေရဲ့ Firmware အမျိုးအစားဟာ .ftf နဲ့ဆုံးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Firmware ကို Extract လုပ်ရပါမယ်။ အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်7zip လေးကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ 7zipပြီးရင် 7zip လေးကို မိမိ Computer မှာသွင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ftf ဖိုင်လေးကို ရွေးပြီး Right Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Extract လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ Folder လေးတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ Folder ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ Firmware ထဲမှာ ပါတဲ့ ဖိုင်တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဖိုင်တွေထဲက userdata.sin နဲ့ cache.sin ကိုယူပြီး Folder တစ်ခုထဲမှာ သက်သက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Flashtool ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ မရှိသေးသူများ ဒီမှာဒေါင်းပါ။ Sony Mobile FlasherFlash Tool ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ Menu bar က Tool ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Bundles ကိုရွေးပါ။ Create ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုပုံစံပေါ်လာရင်တော့ အလုပ်စလုပ်လို့ရပါပြီ။ အပေါ်ဆုံးက Select Source Folder မှာ userdata.sin နဲ့ cache.sin ကိုထည့်ထားတဲ့ Folder လေး ကို ရွေးပေး လိုက်ပါ။ Device ကို Double Click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ မိမိ Fimware ရဲ့ Model ကိုရွေးပေးပါ။ Brand မှာ လဲ မိမိ ဖုန်း Model ကိုရွေးပေးပါ။ Version မှာတော့ Factore reset လို့ရေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ ပြီးရင် Userdata.sin နဲ့ cache.sin ကို ရွေးပြီး ညာဘက်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Create လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Factorey reset ချလို့ရတဲ့ ftf ဖိုင်လေးရပါပြီ။ မိမိမှာရှိတဲ့ Firmware တွေကို ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ Factory Reset ချလို့ရတဲ့ ftf လေးတွေဟာ Size လဲသေးတော့ Download လုပ်ရတာလဲပိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။ မိမိလုပ်လို့ရလာတဲ့ ftf ဖိုင်လေးကို C: ထဲက flashtool Folder ထဲက Firmware ထဲမှာတွေ့ရမှာပါ။ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ .torrent နဲ့ဆုံးတဲ့ ဖိုင်ကို ဖျက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Factory Reset ချတဲ့ Ftf ဖိုင်လေးတွေရပါပြီ။
Posted by phyochan Read More
LG Gflex2နဲ့ အခြား Model မြင့် Lollipop ဖုန်းတွေကို Root မယ် 10:15 AM
အခုတင်ပေးမယ့် နည်းကတော့ LG High-end Model တွေမှာ အဆင်ပြေမှာပါ များသေားအားဖြင့်တော့ Android version 5.0 အထက်တွေဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ် LG G Flex 2LG G FlexLG G3LG G2LG F60LG TributeLG MS395/D393LG L90LG TranspyreLG Volt (LS740) Lollipop တွေနဲ့ KitKat အချို့မှာ ရပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ G Flex2android version 5.0.2 နဲ့ စမ်းထားပါတယ် အရင်ဆုံးဖုန်းမှာ usb debugging ဖွင့်ထားပါ ဖုန်းကို မိမိ Computer က သိအောင် LG Griver ကို install လုပ်ထားပါ အောက်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ် Download LG Driver – Click Here Root လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ LG Root Tool လေးကို အောက်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ် LG Root Tool – Click HerePass- ak@mobilelike LG Driver ကို သွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ PC နဲ့ ဖုန်းကိုချိတ်လိုက်ပါ Usb debugging Request တောင်းရင် Allow လုပ်ပေးပါ အဆိုပါ အဆင့် မသိရင် ရှေ့မဆက်နိုင်ပါဘူး အကယ်လို့ device ကို PC က သိရင် LG Tool ကို ဖွင့်ပါ Shift + Right Click ကိုနှိပ်ပြီး Command Box ကိုခေါ်ပါ ပွင့်လာရင် Text 1 ထဲက Command ကို ၁ကြောင်းချင်း Copy , Paste လုပ် enter ခေါက်ပေးပါ ၃ကြောင်းလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို PC ကဖြုတ်လိုက်ပါ Power ပိတ် လိုက်ပါပြီးရင် ဖုန်းကို Volume + ကိုနှိပ်ပြီး ကြိုးထိုးပေးလိုက်ပါ Downloading ……… ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် စက္ကန့် အနည်းငယ်ကြာရင်တော့ Firmware Update ဆိုပြီးပေါ်လာမှာပါ အဲလိုပေါ်လာရင် LG Root ဖိုင်ထဲပါတဲ့ Ports.bat ကို run ပေးပါ ပေါ်လာတဲ့ စာကြောင်းတွေထဲက အောက်ဆုံးစာကြောင်း COM အနောက်က ဂဏန်းကို မှတ်ထားပါ ဥပမာ – \_Device\_LGMAGKEBSZTD1AG1 REC_SZ COM24 ဆိုရင် 24 ကိုမှတ်ရမှာပါ မိမိဖုန်းအတွက်ကတော့ ပေါ်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းကိုမှတ်ပါ ထို့နောက် commadn box ကိုဖွင့်ပြီ Text2ထဲက ပထမ command ကို ကူးထည့်ပြီး မိမိဖုန်း Port နံပါတ်ကို ထည့်ပေးပြီး Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ # သင်္ကေတလေးပြပါလိမ့်မယ် # နောက်မှာ Text2ထဲက ဒုတိယစာကြောင်းကိုကူးပြီးထည့်ပေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်ပေးပါ Root Expoilt များနဲ့ Root လုပ်ပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် ဖုန်းကိုဖြုတ်ပါ Battery ဖြုတ်ရတဲ့ ဖုန်းတွေက ဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်ပြီး Power ဖွင့်တက်လာရင် Root ရပါပြီ battery သေဖုန်းတွေကျတော့ Power နဲ့ Volume – ကို စက္ကန့် ၂၀ လောက်ဖိထားပါ ပါဝါပိတ်သွားပါလိမ့်မယ် ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ တက်လာရင် Root Access ရပြီဖြစ်ပါတယ် Copy Right @ XDA Aung Khaing (MMAS)
Samsung Galaxy S5 ကို Root လုပ်နည်း 10:13 AM
Samsung Galaxy S5 ဖုန်းအမျိုးအစားသစ်ကို ၂၀၁၄ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ စတင်ရောင်းချ လိုက်ပါပြီ။ အခုပြောပြချင်တာကတော့ Samsung Galaxy S5 ကို Root Access ရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း ( Samsung Galaxy S5 ကို Root လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်)။ လုပ်နည်း ကိုအောက်မှာဆက်လက်လေ့လာရအောင်။ 1. အရင်ဆုံး Samsung Galaxy S5 ကိုကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ USB Drivers ကိုရယူပါ။ 2. Settings >> Developer Options ထဲကိုဝင်ပြီး USB Debugging ကို on ထားပါ။ 3. Firmware မတင်ခင်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းထဲက data များကိုကွန်ပျူတာထဲတွင် backup အနေဖြင့်ကြိုတင် copy ကူးသိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသည်. 4. ဖုန်းက အနည်းဆုံး80 percent လောက် ဘက်ထရီအားရှိနေရပါမယ်။ 5. Root လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဖိုင်များကိုအောက်မှာပေးထားပြီး ယင်း Android CF-Auto-Root ဖိုင်များဟာ Galaxy S5 SM-G900F အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဖုန်းမော်ဒယ်များတွင်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ။ Downloads Required CF-Auto-Root (CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.zip)Odin 3.09 Step 1: အပေါ်က link မှာ download ရယူခဲ့တဲ့ CF-Auto-Root ဇစ်ဖိုင်ထဲကနေ .tar.md5 format နဲ့ဖိုင်ကိုထုတ်ပါ ။ and Odin 3.09 ဇစ်ဖိုင်ထဲက Odin.exe ကိုလည်း ဇစ်ဖိုင်ထဲကနေ extract လုပ်ထားပါ။ ဇစ်ဖိုင်များကိုဖြည်ရာမှာ WinRAR, 7-Zip (သို့မဟုတ်) WinZip ကိုအသုံးပြုပါ။Step 2: ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Volume Down, Home နဲ့ Power ခလုတ်များကိုတွဲနှိပ်ပြီး Download Mode သို့ဝင်ပါ။ Download Mode သို့ဝင်ရောက်ရန် Welcome Screen ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Volume up ကိုနှိပ်၍ Download Mode သို့ဝင်လိုက်ပါ။ Step 3: ကွန်ပျူတာမှာ ခုနကတုန်းက ဇစ်ဖြည်ပြီးရလာတဲ့ Odin.exe ကို run လိုက်ပါ။ Step 4: ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကို usb ကြိုးအသုံးပြု၍ချိတ်ဆက်ပါ။ ID: COM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကွက်လေးထဲမှာ စိမ်းပြာရောင်လေးလင်းလာပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာက detect သိနေပါပြီ။ Added ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်လာပါမယ်။အကယ်၍ မလင်းဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်း driver ကိုကွန်ပျူတာမှာ မှန်ကန်စွာပြန်သွင်းလိုက်ပါဦး ။ Step 5: Odin ဆော့ဝဲထဲက AP ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ခုနတုန်းက ဇစ်ဖြည်ထားခဲ့တဲ့ CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.tar.md5 ဖိုင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ Step 6: Auto Reboot နဲ့ F. Reset Time ဆိုတဲ့ Option ၂ ခုကိုအမှန်ခြစ်ထားမထားသေချာစစ်ပါ။ မခြစ်ထားလျှင် အမှန်ခြစ်ထားပါ။ Re-Partition ဆိုတဲ့ option ကိုတော့ အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားရပါမယ်။ Step 7: ပြီးလျှင် Odin ဆော့ဝဲထဲက Start ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Step 8: root installation process ပြီးသွားတာနဲ့ ဖုန်းက reboot ကျသွားပြီး PASS ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို Odin ဆော့ဝဲမှာမြင်ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းကိုဖြုတ်လို့ရပါပြီ။ Android 4.4.2 တင်ထားတဲ့ Samsung Galaxy S5 SM-G900F ကိုအောင်မြင်စွာ root လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သက်နိုင်စိုး (Myanmar Mobile App Store)
Lollipop 5.0 For Samsung Galaxy S5 SM-G900M / i / H /F / L / S
Samsung Galaxy S5 ရဲ့ model များဖြစ်တဲ့ SM-G900M / i / H / F / L / S တို့အတွက် Lollipop version 5.0 လေးကို တောင်းထားတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေ Download လုပ်နိုင်ရန် Dev-Host.com နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ model ကို Download ရယူလိုက်ပါ။ Dev-Host.com မှ Download ရယူပါ။ …………………………………………………. SM-G900M >>> http://d-h.st/ASY7SM-G900i >>> http://d-h.st/2KjGSM-G900H >>> http://d-h.st/IaicSM-G900F >>> http://d-h.st/EmraSM-G900L >>> http://d-h.st/ckVuSM-G900S >>> http://d-h.st/PbCW
Android Phone များ Screen Lock ( Pattern / Pin / Passcode ) ကျနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်ထားဖို့လိုသလဲ ??? 9:51 AM
ကျတော်တို့ Android အသုံးပြုသူများအတွက် Screen Lock ( Pattern / Pin / Passcode ) ကျနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘာတွေလုပ်ထား သင့်သလဲဆိုတာကို ကျတော့်အမြင် နဲ့ အတွေ့အကြုံလေးအရ ကျတော်တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ Android ဖုန်းတစ်လုံးအသုံးပြုပြီဆိုရင်တော့ လူတိုင်းလိုလို Screen Lock ( Pattern / Pin / Passcode ) ဆိုတာတော့ ထားတက်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို Screen Lock ချထားတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ lock ကို ပြန်မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ User တော်တော် များများအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ data များကိုတော့ပြန်လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲလိုအခြေအနေမှာ Screen Lock ကို ပြန်ဖြည်နိုင်ရန် နည်းလမ်း ( ၂ ) မျိုးရှိပါတယ်။ Reset ချပြီးပြန်ဖြည်တဲ့နည်း နဲ့ Software များကို အသုံးပြုပြီး ပြန်ဖြည်တဲ့နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Reset ချတဲ့နည်းကတော့ ဖုန်းရဲ့ Internal Memory မှာရှိတဲ့ data တွေကို ဖုန်းကအလိုလို မဖျက်ပစ် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ကိုယ်ပြန်လိုချင်တဲ့ Contact , Message နဲ့ အခြားအရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုပြန်ရနိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ data တွေကို ကျတော်တို့ပြန်လည်လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Software များကိုအသုံးပြုမှ အဆင်ပြေ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုအခြေအနေမှာဆိုရင် အရေးကြီးတာကတော့ Computer ကနေ ဖုန်းကို သိနေ ဖို့ ပါပဲ။ အဲလိုသိနေအောင် Setting ထဲကဘယ်အရာရာကို အဓိကအနေနဲ့ on ထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲ ??? ကျတော်တို့ အဲလိုအခြေအနေမှာတော့ အဓိကအနေနဲ့ on ထားဖို့လိုအပ်တာကတော့ Setting >>> Developer option ထဲက USB Debugging ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Function လေးကို on ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ Screen Lock ကို Software တွေနဲ့ပြန်ဖြည်တဲ့အခါ Computer ကနေ ဖုန်းကိုသိရှိနိုင်ရန် support ပေးမှာမ ပာုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ Function လေးကိုတော့ on ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ နောက်အရေးကြီးတာကတော့ သင့်ဖုန်းမှာ Root လုပ်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Root လုပ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ Software တွေကနေ ဖုန်းကိုသိရှိနိုင်ရန် support ပေးမှာ မပာုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Screen Lock ဖြည်ချင်တဲ့အခါ data တွေမပျက်စီးချင်ရင်တော့ ဒီအချက်နှစ်ချက် ကို ပြုလုပ်ထား ရန်လိုအပ်ပါမယ်လို့ မသိသေးသူများအတွက် ကျတော်နားလည်သလို ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Remark ; ယခု version များတွင် Developer option ကိုမတွေ့ရှိပါက About Phone ထဲကနေပြီး Build number ကို ( ၇ ) ချက်လောက် နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် Developer option ကို ဖော်ပေးပါ။
Computer (PC) / Laptop တို့နဲ့ TV ကိုချိတ်ဆက်နည်း PDF
Computer (PC) / Laptop တို့နဲ့ TV ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးကို PDF အနေနဲ့ Download ရယူလေ့လာချင်သူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရယူလိုသူများ အောက်ကလင့်ကနေ ရယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။
လမင်းမောင် နည်းပညာဆိုဒ်တွင် တင်စေလိုသော အကြောင်း အရာများနှင့် အကြံပြုချက်များကို ybigboy@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
HUAWEI Firmware/Update Collection...
Huawei ALL MTK SP FlashTools Firmware Collection (1) G520-T10-V100R001CHNC01B318_SP Flash Firmwarew >>> Download (2) Y511...
အချစ်(လိင်)ဟာ ဆေးဝါး တစ်မျိုးပါ (အသက် (၁၈) ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
အိပ်ခန်းထဲမှ အချစ်ဟာ သင့်အတွက် ကင်ဆာရောဂါကို အောင်နိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အပြင် အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်။ လိင် ဆက်ဆံမှု ပြုလ...
Coolpad ဖုန်းအားလုံးနီးပါးကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ OneClick Root Tool Coolpad ပေါင်းများစွာကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tool လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Tool လေးက ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Tool လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Xiaomi Redmi Note ကို Root လုပ်နည်း Xiaomi ကထုတ်တဲ့ နာမည်ကျော်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi Note ကို Root လုပ်နည်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ -Root လုပ်မယ့် Redmi Note ဟာ...
မြန်မာဖောင့်မျိုးစုံ မြန်မာဖောင့်မျိုးစုံ ကိုCollectionလုပ်ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ဖောင့် အမျိုးအစား(၁၀၂)ခု ရှိပါတယ်။ လိုအပ်ပါ ကဒေါင်းကျပါကုန်။ (1)Smart Zawgyi ...
Post တင်တိုင်းသင့် အီးမေးလ်ထဲကိုရောက်ခြင်ရင်
Miscrosof Office ဆိုင်ရာ
CoolPad Firmware တင်နည်း
Windows Phone မြန်မာ Font
နည်းပညာ SITE များသို့သွားရန်
Clash of Clans v7.65.5 [Mod] Apk ဒီနေ့ထွက်ဗားရှင်းအသစ်လေး
Windows7Pony Edition 2015 x64 (6.52 Gb)
Video Editing အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း-ခြောက် (DVD Menu ဖန်တီးနည်းနှင့် အခွေထုတ်နည်း-ဒုတိယပိုင်း)
ANTI-LOBBY FORCE ဆော့ဝဲ၊ဂိမ်းနှင့်နည်းပညာ
MM Breaking New v1.0(မြန်မာ Website ပေါင်းများစွာကို လွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့်နိုင်မည့် Android App)
FaceBook Account အခမဲ့ဖွင့်ပေးမည်။
လူကို ဓါတ်ပုံရိုက်သည့် အခါ သိထားသင့်သည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
Miscrosoft Office 2010-2007-2003 Full version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း
ဘလော့ခရီးသည် တင်သမျှ ဘလော့ပိုစ်များ
<!-currency converter widget - html code - fx-rate.net --> Kyat Exchange Rate <!-end of code-->
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ စာရင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးအရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးများ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ 2008
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ 1974
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ 1947
ဒဂုန်တာရာ (သုံးနှစ်သုံးမိုး ပိုးထီးငုဝါပွင့် အပြာနု)
ဒဂုန်ရွှေမျှား (အနှစ်တစ်ရာနှင့် လက်ရွေးစင် ၀တ္ထုတိုများ)
ဒဂုန်ရွှေမျှား (ကမ္ဗလာနီအောက်ဝယ် -၂ ) Under The Red Robe
ဒဂုန်ရွှေမျှား (ကမ္ဗလာနီအောက်ဝယ်) Under The Red Robe
ချစ်စံဝင်း တီထွင်မှု မှော်ဝိဇ္ဇာကြီး အယ်လ်ဗာ အယ်ဒီဆင်
ခင်မျိုးချစ် (လောကဇာတ်ခုံ ဇာတ်ခုံလောက)
ချစ်ဦးညို (သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေတဲ့ စကားများ
ချစ်ဦးညို (လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက် အတူထွက်ခြင်း)
အောင်သင်း (အနာဂတ်ကို မကြောက်နဲ့)
အကြည်တော် (ရီတန်းအော့ဖ့် ဘီလူး)
အကြည်တော် (ကဝေပျို၏ နိဒါန်း)
May 30 (48)
Feb 18 (34)
Begin ©1.8.2012 လမင်းမောင် နည်းပညာ ၊ Facebook Account များ ၀ယ်ယူလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် | Facebook Message Box လမင်းမောင် | ဆိုဒ်တည်ဆောက်သူ လမင်းမောင်